trainjourney Archives | Gcina A Isitimela
ekhaya > trainjourney
Kuqhamko yangoku lwezicwangciso umdla ngokujulwa coronavirus ukuba wonke zibe dlakadlaka, kunokuba nzima ukwazi ukuba kufuneka ugcine iholide yakho ngexesha coronavirus okanye. While we can’t make that decision for you if you do choose to continue on it’s important…
Ukuhamba na adventure ultimate kodwa ufanele ukwenze oko emthwalweni free, ingakumbi layovers okanye ukuba une nje usuku simahla kwesinye sezixeko ethandwa Jamani. Sinazo zonke iinkcukacha kufuneka ukuba kwiindawo impahla ngasekhohlo eJamani ezintathu…
Njengoko wazi yonke, YaseVenice sesona sixeko ngokukhethekileyo mnandi kulo lonke elaseYurophu, ukuba ihlabathi. AmaTaliyane wenza ngokupheleleyo aphume imisele zicatshulwa ezincinane, zonke ezo kulala kwisiqithi. Oku kuye lwaba kwidolophu kwenye…
Ukuba nje ndaqalisa ukwenza oluya eBavaria e Germany, ukuba mhlawumbi ndicinga yohambo. Wena kakhulu ukuba ngumse- inani lala iindawo ezimangalisayo ukuba kutyelelo. Plus, ufuna ukwamkeleka kubo bonke a 10 days itinerary…
Kukho kangaka uthando malunga eParis. Phi na nokuba uqale, kunene? Into yokuqala ethi qatha engqondweni na iziza kukhulu Eiffel Tower kunye Louvre. Kodwa kutheni ukufumana ubuncwane obufihliweyo kwisixeko? Let us start with…
IYurophu likhubalo ethile zasebusika ngethuba leenyanga kubanda ukuba azifani nayiphi na indawo apha ehlabathini. Kukho ezininzi iintlobo, kwaye akukho neendawo ezimbini babe imvakalelo efanayo kunye nomoya. Inyaniso, many people say that towns and cities during the…
Uhambo loLoliwe, Qeqesha ukuhamba iOstriya, Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uHambo lwaseHungary, Uloliwe kuhambo Italy, Uloliwe eSwitzerland, Iingcebiso zokuhamba, ...
Yurophu inspires abazobi kwaye filmmakers ukusuka jikelele ehlabathini, ngoko akumangalisi ukuba itsale abenzi bemiboniso ngokufanayo! Fumana 5 Famous Film Iindawo eYurophu ncwadi iiholide zakho kunye nemisebenzi hlala iifilimu owuthandayo ukuba iholide iphelele European…
EMilan ukuya eRoma By Train okanye eRoma ukuya Milan kuyinto engamava lula kakuhle. Hayi umzekelo-icatshulwe beautiful! Ungathatha uloliwe ongabizi mali ininzi kunokuthatha ixesha elide kuneli 3 hours but that Trains from Milan to Rome allows you to jump off at…
10 Most Beautiful Streets EYurophu
IYurophu uzele ezinye Most Beautiful Streets. Ukusuka ubuhle kakhulu kwaye inemibalabala ukuya engaqhelekanga. Ezinye Most Beautiful Streets EYurophu sele yafunyanwa kwaye kakuhle nendele lwengoma umkhenkethi kodwa abanye ngokwenene efihliweyo magugu kuphela…
Uhambo loLoliwe, Uloliwe wokuhamba eBelgium, Uloliwe ohamba eDenmark, Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uhambo eJamani, Uloliwe kuhambo Italy, Uloliwe ohamba eScotland, ...
Italy ngomnye zawo ezingqongileyo bamazwe ethandwa ehlabathini. Abantu umhlambi lizwe ukutya fantastic, isiko, kunye ubutyebi bembali. Inyaniso, akunalo ukuba atyelele kwizixeko ezinkulu ukuba ugonane Italy. A good example…